खुल्लामन्च: June 2009
श्रीमती, कम्प्युटर र सौता :
अर्थतन्त्रको गिर्दो अवस्थाले ज्यादै गाजेको छ, अमेरिकालाई । जि एम सि जस्ता कुनै बेला संसारको सबैभन्दा ठुलो मोटर कम्पनी डुबेको छ भने दिनानुदिन बेरोजगारिहरुको सन्ख्या क्रमश; बढ्दो छ । रेस्टुरेन्ट चलाऊने एक्जना नेपाली साथी भन्नुहुन्छ, 'पहिले ग्राहकहरु मेनु हेरी थपी-थपी खान्थे । अहिले एउटा नान (रोटी) र तरकारी चार जनाले बाडेर खान्छन, चुडी-चुडिकन ।' बफेट लगाउने रेस्टुरेन्टमा आउने ग्राहकहरु पहिले भन्दा बढी खाना प्लेटमा हाल्ने अनी बढी भएको चाँही प्याक गरी "डिनर" को लागि लैजाने बाठाहरु बढ्न थालेका छन रे । त्यसो त अर्थतन्त्र बिग्रिए पछी सबै कुरो बिग्रदो रहेछ । खल्ती बिग्रदो रहेछ । गाडी बिग्रदो रहेछ । भोक र तिर्खा बिग्रदो रहेछ त बानी बिग्रदो रहेछ । हुनुपर्ने रफ्तारमा काम नभएपछी, नचलेपछी मन बिग्रेर प्यालाको साहारा लिना पुग्दो रहेछ । गर्ने काम केही छैन, भएको पनि तुरुन्तै खत्तम अनी मान्छे ज्यादै फुर्सदिलो । फूर्सदिहरुको औषधी, पढ्नेहरुलाई किताब अनी नपढ्नेहरुलाई प्याला ।
हातमा प्याला, परिवारको साथमा । त्यो पनि बिदेशमा । कती रमाइलो छ, सोच्दा त । तर मनभरी पिडा, दिमागभरी चिन्ता र जिन्दगीभरिको परदेशबास के रमाइलो र सुखमय छ र ? कसैको होला र आनन्दी मन, परदेशमा ? स्वदेशमा त मान्छेहरु सोच्लान, बिदेशमा रुखमा पैसा फल्छ, फलेको छ । तिनिहरुका बुढा-बुढी मध्ये बुढो रुखमा चढेर पैसाको हागो हल्लाउने, श्रीमती सम्हाल्ने, हुँदा-हुँदा सम्हाली साध्य नभएर छोरोलाई पनि टिप्न लगाउदाहुन पनि भन्लान । तर गाठे, आफ्नु दु:ख आफुलाई मात्रा थाहा हुदो रहेछ । यो नरक जिन्दगी भन्दा त बरु स्वदेशमै बुवा सँगै हलोको अनोक समाउन पाएको भए उहालाई अलिकती सहयोग गरेको अनुभुती त हुने थियो । यि र यस्तै पीरले प्याला तर्फ लम्केका हातहरुसँगै दिमागमा चिन्ताका अनेकन छालहरु आउँदा रहेछन । त्यही बील तिर्न बाँकी भएको कुनामा राखिएको कम्प्युटर समाउन गयो, समय गएको थाहा नै हुदोरहेनछ । अनी त श्रीमती सँग बोल चालै बन्द । नहोस् पनि कसरी ? मुला बुढो, जाड धोकेको छ । अनी कम्प्युटरमा नानाथरिका खजनाहरु हेरेको छ, बसेको छ । कहिले फेसबूक रे । कहिले माइस्पेस त कहिले ब्लग । घरमा खाने बिखय छैन, बुढोलाई फेसबूक हेर्दै प्याला चाहिने !
हुन पनि हो । गाउमा आमा बुवासगै कोदाली खानेको बानी । पढ्न पनि राजनीति शास्त्र पढियो । त्यो शास्त्र पढियो, जुन शास्त्र आफ्नै मूलुकको लागी अभिशाप शास्त्र भयो । उ बेला हटमेल खोल्ने भन्दा कम्प्युटरमा केही जानिएन । बल्ल बल्ल सिकेको ब्लग लेख्ने तरिका त जसो तसो चलेको थियो । तर फेसबूक भन्ने जन्तु ! त्यो, त्यो फेसबूक हो कि "फेकबूक" हो पनि थिच्या-थिच्यै गरेको, जानेको र सिकेको सामान्-बस्तुहरु थप्दै गा'को । एकदिन बिहान आफुले राखेको "टाइटलको" कमेन्ट हेर्न खोलेको त - फेसबूक खाता बन्द रे । गयो, सबै गयो । बाबुराम भट्टराई देखी लिएर, प्रचन्ड सम्म । मिनेन्द्र रिजाल देखी गिरिजा सम्म । गच्छेदार देखी उपेन्द्र सम्म । गणेश शाह देखी ज्ञानेन्द्र शाह सम्म कताबाट, यताउतिबाट जोडीएका सारा नाम स्वाहा । बाबुराम भट्टराईले त चर्चित भएर अनी बदनाम गराउला भनेर आँफै बन्द गराए रे, पि ए लाई भन्न लगाएर । तर म जाबो न चर्चित, म मामुलीलाइ कसको बदनाम ? मेरो न पि ए, न कम्प्युटरमा बि ए न बि कम । बन्द गर्देछन । मैले के नै पो बिराएको थिएर प्रभु । बिगार्नु भन्दा पनि दु:खाएको थिए होला, श्रीमतिको मन । धेरै बेर कम्प्युटरमा बसेर । छोराको पढाईप्रती ध्यान नदिएर । त्यो बाहेक केही गल्ती गरेको जस्तो लागेन ।
जानी नजानी लेखिएका केही लेखनहरु, जिन्दगीको चौबाटोमा देखिने देखनहरुलाई, यसो यताउतिका पानाहरुमा टासोको रुपमा प्रेशित गरेपश्चात, मिले नमिलेको चिन्ताले होला । कहिले दौतरी त कहिले चौतारीका पोस्टहरु हेर्ने मन र रहरले हत्त न पत्त नजानेपनी कम्प्युटरमा हात पुग्दो रहेछ, बासस्थान पुगेपछी जुत्ताको तुनो खोलु भन्दा पहिले नै । श्रीमान आए, दिनभरिका दु:ख या सुखका गाथा बेलिबिस्तार लाउलान । भोक लाग्यो कि, भएको अनी चुलोमा पाकेको खाजा खालान । के गर्यौ आज, बाबुले के खायो ? सामानहरु केही सिद्धिएको छ कि भनी सोध्लान ! तर, यि यस्ता कुराहरुलाई गलहत्याएर प्याला र ब्लग खोज्न माउस समाएपछी हिजो श्रीमतिले भनिन, 'फेसबूकमा तस्बिर खोजाउने, ब्लगमा प्रेम-पत्र लेखाउने र माइस्पेसमा गोपनियता भन्डारण गराउने यो कम्प्युटर मेरो "सौता" हो । म भए - नाजबाफ । होइन गाठे भनेर उनिसङै प्रतिवाद गरौ भने सबै साचो हो । फेसबूक हराएपनी, आफुलाई अर्कै बनाएर नयाँ खाता खोलिनु । त्यसभित्र 'हराएकी कोही' सदैब खोज्दै जानु अनी खोजिरहनु । ब्लगमा प्रेमका भुतपुर्ब श्रीङ्खलाहरु लिपिबद्द गरिनु । मेरो संसार र तेरो संसार अनी उहाको आगन र हजुरको आगन माउसले हिर्काइ-हिर्काइ खोज्दा-खोजिरहदा न प्यालाको प्यास मेटिदो रहेछ । न समय टक्क अडिदोरहेछ त न कही, कतै केही भेटिदो रहेछ । अनी किन नहोस् त यो निर्जिब कम्प्युटर श्रीमतिको 'सौता' ?
अस्ती हेर्दा हेर्दै माइकल ज्याक्सन मरे । डाँडै उनको रहेछ । भयन्कर, अलिशान भबन । चारै तर्फ हरियाली । हरियालिको बिचमा हेलिप्याड । उनी त यो धर्तिबाट गए । तर भोकले आवाज निकाल्न नसक्ने अमेरिकिहरु उनको देहबसानमा धुरुधुरु रोए । भएभरका अमेरिकी टेलिभिजनहरुमा माइकल भन्दा अरु कुनै खबरै छैनन, कहिले हलिउडको डाडाबाट त कहिले लस एन्जलसबाट । मान्छे मरेपछी मान्छेहरुले बढी श्रद्धा गर्दारहेछन । अरुण थापा मरेपछी सम्मानित भए । उनी जिउदो हुँदा जिन्दगीको निरशाले बागबजारमा बिश पिउदा सम्झाउने कोही भएन । बिचरा मरे अनी उनको सम्मानमा उनका गीतहरु सन्कलित होइन, रिमिक्सिकन थाले । शैलाजा मरेको भन्दा सुजाता मन्त्रेको बढी चर्चा गर्छ, मेरो देश । कुख्यातिहरुले गरेको ख्याती बहिनिको हत्यामा मौन छ, मेरो देश । काकिलाई रत्नपार्कमा नाङ्गै घुमाउदा पेट मिचि-मिची हास्छ, मेरो देश । गगनहरु बोल्दा खोला सुसाउदैन, कोइरालाहरु, दाहाल र नेपालहरु बोल्दा गगन थर्कन्छ, मेरो देशको । त्यसैले मन पोल्छ । बासस्थान पुग्नेबित्तिकै यि पिडाहरु सधैं श्रीमतिसँग बिसाउनु भन्दा कुनामा कोचारिराखेको "खोयाबिर्के"को सहाराले कम्पयुटरमा जता मन लाग्यो, त्यतै माउसले घोच्न मन लाग्छ । औलाले थिच्न मन लाग्छ । थिच्दा थिच्दा बिचरा मेरो बुढीको यो सौता पनि थिल्थिलो भइसकी । भो, आजलाई नथिचुम । यत्तिकै !!! अस्तु !!!
Posted by Unknown Labels: परदेशिको कथा
अल बिदा माइकल ज्याक्सन !
प्रख्यात पप गायक माइकल ज्याक्सनको आज बिहान लस एन्जलसमा मृत्‍यु भएको छ । हलिउडमा, म सानो ब्यापार गर्छु । अमेरिकि सेलिब्रेटिहरुको बासस्थान हलिउडमा आज सन्नाटा छाएको छ । सुनसान छ, हलिउड । त्यसै क्षेत्र वरपर आज उनका छिमेकिहरू बडो दुखित देखिंथे - एकाएक उनको मृत्युको खबरले । आज प्रख्यात सिटी बेवरली हिल्स, लस एन्जलस र वरपर सडकभर ज्याक्सन प्रती श्रद्धाभाव दर्शाउदै थिए, उनका शुभचिन्तकहरु । लस एन्जलसस्थित आफ्नै निवासमा ह्रदयाघात भएका ज्याक्सनलाई युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, लस एन्जलसको मेडिकल सेन्टरमा लगिदै गर्दा दिउँसो २ बजेर २६ मिनेटमा उनी यस संसारबाट बिदा भएको घोशित गरिएको थियो ।
१३ ग्रायमी अवार्ड र १३ नम्बर वन सि‌गल्स जित्ने उनको कीर्तिमान अहिलेसम्म कसैले तोड्न सकेका छैनन्। चार दशकसम्म उनी विश्वभरका मिडियामा छाइरहे। पछिल्लो पटक भने विभिन्न स्क्याण्डलमा जोडिएर उनको नाम आउने गर्थे। बाल यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा उनीमाथि छानबिन समेत भयो। तर आरोप प्रमाणित हुन सकेन।
आफु पनि स्वदेशमा रहदा संगीतको बिद्यार्थी पनि रहेकोले होला - एउटा पप सम्राटको देहबसानले हृदय चिसो भयो । अल बिदा - माइकल, अल बिदा !!!
Posted by Unknown Labels: समबेदना ।
परदेश, परिवार र पैसा :
परेदेशको दु:खले भनेको समयमा काट्न नसकेको कपाल कन्याउदै स्वदेश, आफन्ती र परिवारको सम्झना गर्दा प्रायश: मुटुमा साह्रो धक्का दिदो रहेछ । नयाँ पत्रिकामा हिजो " चैते, छिटो घर 'आ " शिर्शकको लेख पढ्दा मुटु भकास्सिएर आयो । त्यो लेखको पुरा भाग पढि नसकी बिचमै आशु पुछ्दै माउसलाई अन्यत्रै चलाऊन वाध्य भए, म । साहुको १५ हजार रुपैया ऋण तिर्न बोकेको भारिका नाम्लाका पाताले कपाल सबै झरेको ब्यथा पोख्दैथिए, चैते आमासँग फोनमा । स्कुलमा काम गरेर चलाएको जिबिका, बासी ढिडोले झाडापखाला लागेर बहिनी मरेकी घटना, गत महिना रामे साहुले घर पनि कब्जा गरेको आशुको बेलिबिस्तार र सेउलाले बारेर गुजारा चलाएको आमाको बियोग, बिरानो ठाउबाट फोन मार्फत छोरा चैतेलाई बताएकि दर्दनाक कथा । आफ्नै देशको तितो यथार्थ पढ्दा साह्रै नमिठो लाग्नु स्वाभाबिकै थियो । यहाँ यो वास्तविकता उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक यस अर्थमा लाग्यो कि, आखिर चैते बाबुको मृत्‍युको ब्यथा र ऋणको बोझले १४ बर्षको उमेरमा परदेशको चिसो छिडिमा रात गुजारि-गुजारी दु:ख गर्दा पनि आय-आस्थाले नपुग्नु दैबको कत्तिको न्याय हो ? चैते भाई देशको मात्र एउटा उदाहरण हो, ऊ त एउटा पात्र मात्र हो । लाखौ चैते जस्ता भाईहरु आज मुलुक छोडि परदेशिनु पर्ने कटु बाध्यता र परदेशको अथाह दु:खका जन्जिरहरुले पोलेका मनहरु छन, हामीसित । परदेश भासिएका कयौ मध्यको एक पात्रको नाताले यहाँ केही कोर्ने दुस्साहस गरेको मात्र हुँ ।
अरब, अमेरिका, जापान वा मलाया । जहाँ रहेपनी हामी माता र मातृभूमी भन्दा अलग र टाढा छौ । परेदेशिनुपर्ने अनेकन कारणहरु त आफ्नो ठाउमा छदैछन् । त्यसभन्दा अलग हामीलाई परदेश पठाउने नाउमा दलाल, संस्थाहरुबाट गरिएका ब्यक्तिगत र आर्थिक शोशणको पिडा दु:खदायी भएको सबैलाई ज्ञात भएकै बिषय हो । बहिनिको बिहे गर्दा लागेको ऋण, बाबुले जुवा तास खेली सम्पत्ति स्वाहा पारेको ऋण, गुजारा चलाउन मागिएको ऋण र ऋण बापत महाजनहरुलाई तिर्नुपर्ने असिमित ब्याजले लगाउने अर्को घाऊ झनै बढी चहर्याउने हुदोरहेछ । अब, हवाइजहाजमा छाडेर, भर्खरै बिहे गरेकी श्रीमती छाडेर, गर्भवती प्रेयसी छाडेर, माता-पिताको न्यानो स्नेहलाई चटक्क छाडेर, छोरो रोला भनी एकबिहानै उसलाई नउठाइ चुप्प निधारमा चुम्बन गरी मायालाई सम्झनामै छाडेर, साथीभाइ, इस्टमित्र, आलो मायाकी प्रियतमालाई छाडेर काठमान्डौको मैदानमा उड्नैको लागि गूड्न पर्दा बिहानै एअर-होस्टेजसँग एक प्याग प्याला माग्न मन लाग्दो रहेछ । भयो पनि त्यस्तै । भर्खरै प्याला पिउने बानी बसेको थियो क्यार । म परदेशिदा हाजात् (हवाइजहाज)मा आन्टी (होस्टेज)ले जितु नेपालले भनेसरी सोधिन्," ओइ, के खान्छस ? " परिवार बिछोडको रन्को अनी बहुतै गह्रुङो ऋणको बोझ । साथीहरुले भन्थे, प्यालाले चिन्ता हटाउछ । त्यसैले मलाई के मागुम्, के मागुम् भाको'थ्यो । नाम पनि आएन । " रेड लेबल दिनु न, हजुर " भने । आन्टी दङदास् । एउटा सानो बोत्तल र प्लास्टिकको गिलास दीइन । मैले पनि मारा दन्काइदिए पो । जहाज थियो, कतार सम्मको लागि । त्यसभित्र आन्टिहरुले स्वदेशिलाई गर्ने व्यबहार त यहाँ के उल्लेख गर्नु पर्ला र ? त्यसमाथि पनि एकाबिहानै रक्सी मागेपछी ! आन्टिहरुको व्यबहार उल्लेख गरेर आफ्नो नाक आँफै नकाटौ भो ।
जब मान्छेलाई दु:खले चेप्दछ नि , त्यसबेला अनेक कस्टहरु पनि चौघेरो भएर घेरिदा रहेछन । सम्पत्ति के सबैभन्दा ठुलो चिज हो ? पैसा हुनेलाई मात्र समाजले स्विकार गर्दछ ? निर्धनहरुको चाँही के जीबन होइन ? चैते भाईको पिडा र आमाको अस्मितामा किन तथाकथित समाजको गिद्धेद्रिस्टी पर्दैन ? फेरी महाजनहरुले परिवारलाई दिने दु:ख र टोकसो सम्झदा हरेक परदेशिको मन कटक्क कुट्किदो रहेछ । कहाँ हो, कता हो ! बस्ने कुनै ठाउँ छैन । खाना त कुन चराको नाम पो हो ? यस्तै हुदो रहेछ । एक छाक कम खान पाए मात्र पनि ऋण थोरै घट्थ्यो कि भन्ने पिरलो मात्रै । त्यसपछी बसोबासको त केही न केही अर्थ लाग्ने नै भयो । बिचरा चैते भाई पनि कसको सहरामा घर छोडि हिंडेको हो र, मनको सपना बाहेक ?
टोकसो किन पो घट्थ्यो र, महाजनहरुको ? आउने बित्तिकै, फेरी भन्ने बित्तिकै पैसा कमाउन पनि नसकिदो रहेछ । परदेशमा बस्ने ठाउँ पनि भन्ने बित्तिकै कसरी मिल्दो रहेछ र ? सबै आ-आफ्नै धुनमा । चिने जानेको कोही नहुँदा स्वस्थानीमा पढेको नरक जस्तो हुदो रहेछ, परदेश । रात त जता गए पनि पर्दो रहेछ फेरी । रातमै सम्झना बढी, आमाको, छोराको, बुवाको र बुढा हजुरबुवा-हजुरआमाको । तर पीर सधैं ऋणको । "कागज" (वोर्क पर्मिट् ) चाहिने रहेछ फेरी काम पाउन । बिस्तारबादी भनी गाली गरेर के गर्ने ? त्यही भईयाहरुको धोती नमसारे काम मरु । रातमा काम गर्नुपर्ने भो । ऋणको पीरले परिवारले मर्नुपर्ने भन्दा त परदेषिलाई बाध्यताको लागि जे पनि गर्नुपर्ने ठुलो हुदोरहेछ । लागियो काम । हिजो अस्ती पीरले निद्रा हराम हुन्थ्यो भने आजबाट कामले सबैथोक हराम ।
गर्दै जादा दु:ख र कस्ट त कहाँ पो नहुदो हो र ? प्रबल ईच्छा र घनघोर बाध्यताले समय गएको पनि पत्तो नहुदो रहेछ । २ पछी आउने ३ र चारै रहेछ, रैतिको मुलुकमा पनि । वर्शौ बिते, दु:खमा, सम्झनामा । रोदनमा अनी कस्टमा । चाडबाडमा सम्झना र शुभकामनाका खातिर परिवारलाई गरिने फोनहरु पनि बढो अश्रुपूर्ण हुँदा रहेछन । सम्पत्तिवालहरु गरीबका छोरी बलत्कार गर्दै हिडिरहेका छन रे मुलुकमा । धनीले गाडीले हानेर हजुरआमा मारिदियो रे अस्ती । यि र यसै खबरहरु हुँदा रहेछन, हरेक सम्झनाका फोनहरुमा । आमा भन्नुहुन्छ - "बाबु कहिले आउछस ? कती दशै-तिहार आए, गए । सबैका छोराहरु आउछन बिदेशबाट । तं भने ।" बुवा फोन समायो कि खाली रुनुहुन्छ, केही नबोली । हजुरआमा भन्नुहुन्थ्यो, " बाबु म त तिमीलाई देख्न नपाइकन मर्छु कि क्या हो ।" क्यान्सरले केही महिना अघी हजुरबुवा बित्नु भो ।
पैसा मात्रै केही होइनरहेछ । तर पैसा सबथोक हो रहेछ । सम्पत्ती केही होइन भनुम् भने, राजा बिरेन्द्रले नागर्जुन् बनदेखी गोरखकाली मन्दिरसम्म आफ्नै नाममा गरेका थिए । सम्पत्ती केही हो भने, बिरेन्द्र मरेर के लगे त ? उनले त लान केही पाएनन्-पाएनन्, शाखा-सन्तानको मृत्‍यु संगै के गयो त ? त्यत्रा सम्पत्ति र बिर्ताका मालिक ज्ञानन्द्र महाराज बनमा थुनेको बाघ झै बस्नुपरेको छ । रुपैयाको मुल्य छैन भने, किन महाजनहरु सदा गरीबमाथि खनिन्छन ? चैतेभाइ, म र खाडीका मेरा दाजुहरु, इजरायलमा मेरा दिदिहरु किन रातदिन रोएर बस्नु परेको छ ? के यो संसारको नियम हो ? गरीबको लागि मात्र भनेर बनाएको परिधी हो ? हो के र होइन के त ? खै के खै के ???? म त आश्चर्यमा छु ।